Deja Vous | rafozan-doza |
Published on 05/18,2009
Asa raha misy joincidence na ahoana fa tato ho ato izany dia lasa otran'ny manana tendance suicidaire izany doly ny film hitako. Ka lasa ihany ny saiko hoe ra zao tokoa moa? toa miodina ihany ny tany kanefa dia toa tsy mirotsona akory izaho/isika. Mino aho fa efa manana an'ilay lisitra doly. Satria araka ny @ film hoe refa ho faty enao dia mandalo en flash eo @ masonao doly ny fiainanao iray manotolo. Zany hoe ra mbola tsy maty dia aleo ezahina tsipihana tsirairay aloha ny tanjona ao @ lisitra sitrany ahay. Mba ho fatsiarovana fa nandalo teto antany ny anarako.
Tsy hoe hamono tena akory an fa le hoe if tomorrow never comes. Dia ahoana, aleo lazaina ihany izay any antsaina satria na misy fotoana aza ny zava-drehetra dia inoako fa tsy ao arinan'ny fahafatesana izany fotoana izany. @ lafiny iray koa anefa aleo somary taratara toy izay tonga aloha loatra ka asa. Ilay izy koa tsy fantatra intsony izay tena marina sy tokony hatao satria otran'ny efa nitranga izany doly ny zavatra rehetra. Impression ve izany sa inona loatra. Ny rediredy ve no tena izy sa ny tany no mivadika ambony ambany.
Rehefa natao ny fandinihana manko dia ny fahanginana no fahavalom-pirenena. Jereo anie ee, rehefa misy manao meditation, any ampiangonana na tsy haiko any @ ilay trano fanaovana masazy ireny, ilay feonkira natao handaminana ny fanahy iny mihintsy no vao mamporisika be anah te hibitsibitisika be. Ny bitsibitsika anefa ho re mafy be rehefa samy variana mihaino ny mozika sy miandry izay hiteny voalohany ny mpiara-miangona. Dia na resaka tsisy dikany aza ataonao dia efa faly doly ny pokona. Fa aleo ihany aloha masazy toy izay fiangonana no anaovana an'zay ee. Satria ny hatoka tsy ho vizana, ny fahafinaretana ho azo. @ firy enao no mirava?
Tsy nila nandinika akory aho dia nahatsikaritra zavatra roa. Voalohany indrindra aloha dia otran'ny tsy mba nahita olona tena mpanohana an'i tgv hoe fanclub 100% ka hoe namahana bolongana momba izany. Any @ forum doly izy ireo no mifatratra. Ka asa raha hitan'ny filohampokotanin'ny fan club an'i tgv ity fa mafinaritra, zany hoe classy, kokoa ny blaogy noho ny forum. Asa mety za koa no tsy maharaka fa dia lasa saina mintsy hoe tsy mba misy olona na dia iray akory aza ve mba mitoraka momba ity kozy masina ity?
Faharoany indrindra, somary gaga ihany mahita otran'ny en mode ralentie, slow motion, ny blaogasifera hatr@ niandohan'ny krizy iny. Tsy rehefa misy krizy ve vao tokony hiady hevitra be ny pokona? Ny tena mahagaga dia ireo eto antoerana izay misy mandrahona @ telefona indray no mavitrika kokoa. Mbola mahagaga ambonin'ny gaga dia 50% na latsaka kely an'ny blaogasifera dia ivelan'ny Madagasikara, izay azo lazaina fa tsy mitoraka mihoatra ny 3 na 4 momba ny resaka politika eto antoerana izany akory. Mampalain-komana ve ny krizy sa... nankaiza ny tanteliko teto o?
Eto ampamaranana dia tsy aritro ny tsy hilaza fa tsy hitako mintsy izay nampahazo oscars bedabe an'ny "slumdog millionaire". Mbo kozy e, tsisy zavatra mahaliana mintsy, in-1 ngamba no mba nisy ol nifanoroka tao. Tapany fotsiny koa ary izany. Ny hany mba ekeko hoe nahazoany oscar anaki-1 dia ilay bandy kely nanao ankiletika tao anaty kapa iny. Koa manentana antsika eto @ blaogasifera aho hoe sao dia mba tokony ampidirina @ competition koa ny horonan-tsary malagasy fa mety ho azon-tsika doly izy rehetra.
Posted by simplex at 20:45 Hametraka hevitra (9) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Rediredy